Daw Ei Ei Khin Aye appointed as Ambassador of Myanmar to Indonesia – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
Daw Ei Ei Khin Aye appointed as Ambassador of Myanmar to Indonesia
The President of the Republic of the Union of Myanmar has appointed Daw Ei Ei Khin Aye, Deputy Permanent Representative of the Permanent Mission of the Republic of the Union of Myanmar to the United Nations in New York, as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the Republic of Indonesia.
Dated.5July 2017
ဒေါ်အိအိခင်ဧ အား အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာ အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံး၊ နယူးယောက်မြို့မှ ဒုတိယအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်အိအိခင်ဧ အား အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီးအဖြစ် ပြောင်းရွှေ့ ခန့်အပ်လိုက်ပြီးဖြစ်သည်။